Mourinho: meeshaan rabay waan joogaa - BBC News Somali
Mourinho: meeshaan rabay waan joogaa
Image caption Mourinho ayaa caan ku ah guul xilli ciyaareed adag ayaase sugaya
Jose Mourinho ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu maamulo Manchester United, isaga oo ku adkaystay in uu joogo “meeshii uu rabay.”
53 jirka reer boortaqiis ayaa intaas ku daray in shaqadani ay tahay shaqo uu qof kaste jecelyahay in uu qabto isla markaasna aysan fursad u helin, balse uu isagu helay jaaniskaas.
Tababarihii hore ee Chelsea wuxuu badalay Louis van Gaal oo shaqada laga eryay kaddib markii uu bishii May ku guulaystay koobka FA-ga.
Mourinho wuxuu sheegay in uu ka “xunyahay” in United aysan ka dheelaynin horyaalka Yurub ee Champions League xilliciyaareedkan foodda inagu soo haya, balse wuxuu ku adkaystay in uu Old Trafford u yimid in uu koobab ku guulaysto.
Wuxuu sheegay in uu doonayo “in uu badiyo marka kooxdiisu ciyaarayso, si wanaagsana u ciyaaraan, goolalna aan laga dhalinin. Wuxuu sheegay in uu doonayo in taageerayaashu taageero u muujiyaan, uuna ogyahay in aysan wax kaste ku guulaysan doonin balse ay sidaas rabaan.
Waxaa la waydiiyay in uu u baahan yahay in uu awoodiisa muujiyo maadaama oo laga eryay Chelsea, wuxuu ku jawaabay in ay jiraan “macallimiin aan toban sano ku guulaysanin koob iyo kuwo aan waligoodba koob ku guulaysanin, isaguna uu sanad kahor ku guulaystay horyaalka Ingiriiska.
Image caption Ibrahimovic iyo Mourinho ayaa horay u soo wada shaqeeyay
Wuxuu sheegay in aysan u suurta gasheen in uu shaqeeyo haddii uusan guulaysanaynin taasna ay dhaqankiisa tahay.
United waxay ciyaryahanada ku soo kordhisay Zlatan Ibrahimovic iyo Eric Bailly oodifaaca uga dheela dalka Ivory Coast.
Waxayna danaynayaan in ay soo gataan Henrikh Mkhitaryan oo khadka dhexe uga dheela Borussia Dortmund.
Mourinho wuxuu sheegay in uu jiro ciyaaryahan kale oo uu doonayo in uu keeno kooxda.
Wuxuu sheegay in ay go’aansadeen in ay soo gataan afar ciyaaryahan ayna dadaal dheeri ah samayn doonaan ilaa kan afraad laga helayo. Wuxuu sheegay in ka saddexaad la shaacin doono wakhti dhaw.